BEERAHA BEERAHA EE BARADHADA "ROZARA" - BARADHADA
Bataatada beeraha "Rozara": xeerarka beeritaanka iyo daryeelka
Baradhadu waa kuwa ugu caansan oo laga dalbado khudradda dalkeenna. Marar dhif ah qof kasta oo cunto ah kuma jiraan dhaqankan. Waxaa jira noocyo badan oo ka mid ah dhaqankan, laakiin waxay heshay caan. baradhada "rosara". Waxay isku dhafan tahay isku dhafka iyo nafaqada. Kala duwanaantani waa mid aan qabyo ahayn waxayna ku koraan xaalad kasta oo cimilada ah.
Astaamaha noocyada baradho "Rosara"
Kala duwanaanta baradhada "Rosara" waxaa lagu xayeysiiyay jadeecada Jarmalka sannadkii 2009, iyo astaamaha ay muujinayaan in ay tahay mid hore u soo kordhay. Buundooyinka dhaqanka ayaa kor u kacaya, koraya oo toosan. Ubaxa - Roodh casaan iyo guduud. Midabka miraha - wuxuu casaanay casaan, casaan ama madow. Peel - adigoo indhahoodu yar yahay. Laalaabka "Rosary" waa mid huruud ah.
Baradhadu waa la goyn karaa 65 maalmood ka dib caleemaha ugu horeeya. Hal baadiyaha ayaa koraa ilaa 18 digriiga, mid kasta oo miisaankeedu yahay ilaa 150 garaam. Mid ka mid ah miro, oo leh daryeelka caadiga ah ee baradhada, waxaad u guran kartaa ilaa 400 kg dalagga, iyo dadaal weyn iyo ilaa nus tin (milkiilayaal badan ayaa soo goostay dalag weyn, sida duurka kala jajaban oo leh ilaa 25 gogo '). Awoodda lagu kaydin karo baradho kala duwanaanshahan waa mid ku filan oo ku filan, iyada oo aan lumin dhadhankiisa. "Rosara" ayaa si sahlan loo qaadi karaa, waxsoosaarkuna lumay 5 sano gudahood (cusbooneysiinta abuurka looma baahna).
Arin aad u muhiim ah Kala duwan tani waxay u adkaysato cudurada fangas badan. Waxay ku koraan jawi kasta oon ka baqin xitaa xaaladaha cimilada daran.
Baradhada "Rosara" waxay leedahay faa'iidooyin badan, laakiin sharaxaadda astaamaha noocyada kala duwan ma noqon doonaan kuwo dhammeystiran haddii aadan sheegin qaar ka mid ah cilladaha ugu waaweyn: Baradhada abuurka waxay siiyaan beergoosasho wanaagsan kaliya haddii digriiga miisaankoodu yahay ugu yaraan 50 garaam. Marka beerto baradho ah dhammaadka May, goosashada waxay inta badan ku dhacdaa noocyo xilli-dhexaad ah. Si aad u ogaato in dabeecadaha kala duwan ee loo yaqaan 'varietal characteristics' ay si buuxda u muuqdaan, waxaa lagula talinayaa inay ku beeri Rosaru gobolladaas oo ah beeritaanka baradho bilaabmaa dhammaadka Abriil ama horraanta May.
Waxay noqon doontaa mid waxtar kuu leh inaad wax ka barato noocyada noocan oo kale ah ee baradho sida: "Gala" baradho iyo "Kiwi" baradhada.
Iyada oo ay sabab u tahay nacnac yar (ilaa 16%), waxaa loo isticmaalaa saliid iyo salad. Kala duwan ee baradho this, inkasta oo aan qabyo ahayn, laakiin weli waxay u baahan tahay waafaqsan shuruudaha beeraha iyo beeraha.
Ma taqaanaa? Baradhada lo'da ayaa loo tixgeliyaa warshad sunta dadka. Midabkiisu waxay ku badan tahay sunta jidhkeena, laakiin si wadajir ah ayaa loo soo ururiyey digriinka si ay u waxyeeleeyaan qof, waxaad u baahan tahay inaad isticmaasho 1 kg oo ah baradho cagaaran oo aan la dubin.
Doorashada goobta loogu talagalay baradho sii kordhaya
Waxyaalaha baradho kasta waxay ku xiran tahay shuruudaha ku saabsan bacriminta ciidda iyo qoyaanka. Wixii sii kordhaya "Rosary" carrada ku haboon, ciidda iyo loamy carruureed, iyo sidoo kale godadka la miiray. Wixii kala duwan ee baradho ah, bacrin ah oo aad u wanaagsan oo carrada ku habboon, kuwaas oo si dhakhso ah u qalalaan guga. Waxaa fiican inaad ku dhajisid tufaaxa xayawaanka yaryar ee koonfurta ama konfurta koonfur.
Markaad dooranayso qorshe, maskaxda ku hay in baradho waa warshad jeceshahay iftiin aad u badan, iyo adigoo shooga si aad u siyaadinaya koritaanka dushooda, taas oo dhaawici doona tuberization.
Rozara waxay ku sii xumaataa dhoobada culus iyo carrada dhoobada culus, gaar ahaan haddii biyaha dhulka ku dhow yahay dusha sare. Baradhadu waxay si wanaagsan u miro dhalinayaan marka ay hal meel u degaan muddo dheer, laakiin meelihii beerto waa in si joogto ah loo beddelo. Haddii aad si joogto ah u koraan dalagga this isla goobta, beergooyska si weyn loo yareeyo iyo baradho ka adkaan doonaa cudurka.
Waa inaadan beeran noocyo kala duwan ka dib tamaandhada iyo xitaa iyaga u dhow, sida fungus phytophtora fungus u saameeyaa labadan dalag. Waxa kale oo aan suurtagal ahayn in la gooyo "Rosaru" ka dib masaggada, sun-qoraxda iyo habeenkii kale.
Kuwa ugu fiican ee baradho waa bocorka, digirta, qajaarka, dhammaan noocyada kaabajka.
Shaqo diyaargarow goobta
Sida ugu dhakhsaha badan ee diyaarinta beerto baradho ah ayaa bilaabmey, si dhakhso ah dalagga ugu horreeya ee digriiga yar yar ayaa la goostayaa.
Ciidda waa inay ahaato mid aan qoyaneyn, lumpy leh qaab dhisme ah, kaas oo hayn doona qoyaanka si fiican iyo ka hortagga uur-tagida habeenkii. Sida laga soo xigtay talooyinka Fiisooyinka, miyaga dhulka ee aagga aad qorsheyneyso inaad baradho siineyso sanadka soo socda. Cawsku wuxuu dilaa infekshannada fungal ee ciidda iyo jeermiska isaga. Maydhista waa in laga tago dhulka iyo ka dib markii uu baraf ugu horeysay, isagu qudhiisu wuxuu dhawaan u dhiman doonaa.
Dhexdhexaad xilliga gu'ga, dhulka ayaa la qoday iyadoo ay la socoto cawska oo la daboolay, kaas oo la jeexjeexay, kuleylaya carrada. Xilliga dayrta, hubi inaad ku darto compost si ciidda. Guga wuxuu diirin doonaa dhulka, oo wuxuu siinayaa diirimaad dhankiisa.
Waxaan kugula talineynaa in aad wax badan ka barato beerista toonta, yaanyada lakala, dill, malayga, basbaaska yar, rokambol, zucchini, kala duwanaanta basasha.
Isla muddadaas, bacriminta fosfat iyo potash ayaa lagu dari karaa. Kaydinta xashiishka ayaa si adag loo mamnuucay. Waxa la geli karaa oo kaliya xilliga guga hore. Isla mar ahaantaana, ka saar barafka laga soo bilaabo beeritaanka mustaqbalka ee baradhada, si ay dhulka u dhaqaajiso si dhakhso ah.
Waa muhiim! Si ciidda si dhakhso ah u waraabiyo, waa in lagu waraabiyaa biyo diiran oo dabool leh filim madow qaro weyn. Wixii ka dambeeya caleemaha ugu horreeya ee haramaha way baaba'ayaan.
Sida ugu dhakhsaha badan ee ciidda tuubada 10 cm qoto dheer, waxaa suurtogal ah in lagu daro "xaalad" organic: digada, compost, peat ama shimbir xaarka. Waxaad sidoo kale ku dari kartaa phosphate, nitrogen iyo potash Bacriminta. On 1 m² ee ciidda waxay qaadataa 30 g of amooniyam, ilaa 40 g of superphosphate iyo in ka badan 40 g oo ah Bacriminta potash.
Ma taqaanaa? Fiisooyinka Faransiiska Antoine-Auguste Parmentier, oo doonaya inuu barto muwaadiniinta muwaadiniinta inay cunaan baradhada, waxay isticmaalaan hal hab oo nafsi ah. Beerta uu barafku horayba u jirey ayaa si adag loo ilaaliyay maalintii, laakiin habeenkii ayaa ilaaliyey ilaalada iyo dadka, sababtoo ah cajiib ah, waxay gashay dhulka oo waxay xadeen digriiga. Farxad ayaa ku guuleysatey, waxay dadka u wareejisey marawaxadaha cusub ee gaasaska.
Seeds of noocyo baradho "Rozara" waxaa laga iibsan karaa dukaamo khaas ah ama qaadan digriiga laga bilaabo goosashada sanadkii hore. Ka hor inta aan la beeri "apple earth", digriiga waa in la qabtaa tababarka gaarka ah:
Qaado digriiga beerto 50 ilaa 100 garaam. Si taxaddar leh u qaado barandhada oo ha beeran.
Xilliga gu'ga xilliga gu'ga, ka bixi bataatada iftiinka si ay digriiga u soo baxaan. Heerkulku waa inuu ahaadaa ugu yaraan +15 C
Laba todobaad ka hor laga beerto, waxaa lagula talinayaa in lagu diiriyo baradho heerkul ah + 4 ... + 6 ° C. Taasi waxay u fiicantahay in ay hoos u dhigto Maqsin.
Digriiga waaweyn oo leh sprouts filamentous ayaa si fiican loo tuuraa. Maaha kuwo ku haboon in la dego.
Baradhada abuurka waaweyn waxay si fiican u kala qaybsan yihiin laba, ka dibna duurka waxay noqon doonaan mid xoog leh, qaro weyn oo leh caleenta ballaaran.
4tii sanoba mar waxaa lagama maarmaan ah in la cusbooneysiiyo wax soo saarka si looga fogaado in la burburiyo dalagga iyo xumaanshaha noocyada kala duwan.
Beeritaanka noocyo baradho ah "Rozara"
Beeritaanka noocyo baradho ah "Rosara" waxaa la fuliyaa horraantii May, markii dhulka horeba si wanaagsan loo diiriyo. Nidaamkan waxaa ka mid ah talaabooyinka xiga:
Ka hor intaan la beeriin, dhulka waa in la xoqo qoto dheer oo qiyaastii 30 cm ah. Sharciga dahabiga ah waa: "Dhulka hoose ee la xoqay, waa ka sii wanaagsanaanta beerashada baradhada."
Saacad ama laba ka hor intaan la beeriin, jarjar digriiga kala bar oo ha ku qallalaan hawada furan. Kala qaybso sida ugu yaraan hal jeermis ah ayaa ku jirta qeyb kasta.
Kordhee qolofka ukunta iyo isku dar qasaaraha, ku dar diirka basasha - taasi waxay noqon doontaa bacriminta aad u fiican ee dhulka.
Samee godadka digriiga leh qoto dheer oo ah 10 cm, haddii ciidda ay tahay bac, iyo min 6-8 cm, haddii ciidda uu dhali karo. Masaafada u dhaxeyso 40 cm, iyo inta u dhaxeysa saf - ugu yaraan 65 cm.
Ku dar bacriminta loo diyaariyey si kasta oo ay u dhigaan digriiga baradho ah ee dusha sare, ka dibna daboolo daloolka dhulka.
Ka dib markii la beerto aagga oo idil waa in la si badan u waraabiyo.
Ma taqaanaa? Haddii iodine hoos loo dhigo barafka, waxay isla markiiba noqotaa mid buluug ah - waxay gasho dareeraha kiimikada. Laakiin waxaa jira noocyo dhaqanka ah oo dabiiciyan ah buluug, gudaha iyo dibadda. Mid ka mid ah wakiilada ugu caansan waa "Linzer Blaue".
Daryeelka Caleenta Baradhada
Bataatada beeraha "Rozara" waa in ay la socotaa daryeel wanaagsan oo waqtigana leh. Kaliya kiiskan, waxaad helaysaa goosashada qani ku ah.
Haddii kuleylku yahay mid kulul oo qalalan, hubi inaad biyo bataatid. Halkan waxa ugu muhiimsan ee wax kasta oo ka mid ah dhexdhexaadinta, sababtoo ah xad-dhaaf ah digriiga qoyaanka ayaa qudhmi kara. Rozary waxay ku koraan dhalooyin adag oo si fiican u horumarsan, sidaa daraadeed waxay u baahan tahay waraabin joogto ah oo lagu waraabiyo xilliga cimilada qallalan. Ku shub 5 litir oo biyo ah baadiyaha.
Ilaa caleemaha ugu horreeya muuqday, ciidda waa in la daboolaa laba jeer, burburinta dhammaan haramaha oo u muuqday. Sidoo kale, ka hor inta caleemaha ugu horeeya u baahan yihiin in la qodo dhulka.
Burburka ugu horeeya waxaa la sameeyaa toddobaad kaddib marka la beerto, iyo kan labaad - toddobaadkii ka dib. Nidaamkani wuxuu ku darayaa ciidda leh oxygen. Marka duurka baradho u koraan 10 cm ee dhererka, waxaa lagama maarmaan ah in la sameeyo beerashada isku xigta. Hawshan waxaa lagu sameeyay hoe ama ploskorezom. Uga beerashada qoto dheer 10 cm waxay burburisaa cawska cawska hurdada leh, wuxuu kor u qaadaa dalxiiska ciidda leh ogsijiinka, iyo sidoo kale hagaajinta dheecaanka.
Haddii qoyaanka ciidda la kordhiyo, waxaad xakameyn kartaa oo qoto dheer u tahay. Cagaarcaha haray waxay ku darsan karaan gacmaha. Wixii hal ama bil iyo badh bilood waa in ay noqdaan 3 dabacsanaan. Wakhtiga 10 ama 15 maalmood - aad horey u dooratay, oo ku saleysan xaalada sariirta barafka.
Kala shaqeynta finan ee baradho isticmaalaya hilling waa in la fuliyaa inta lagu jiro xilli sii kordhaya iyo ugu yaraan laba jeer. Nidaamka waxaa la sameeyaa ka dib roobab ama waraabiyo warshad ah. Hilling ugu horeeya, baadiyaha hareerihiisa waxaa lagu rusheeyaa dhulka 12 cm, iyo hollada labaad - 20 cm. Shaqada waxaa lagu sameeyaa hoe ama hile. Haddii xagaaga uu ahaa mid qalalan, ka dibna nidaamka hillku waa mid aan loo baahnayn.
Ma taqaanaa? Kala duwanaanshaha baradhada ugu qaalisan adduunka waa "La Bonnotte". Waxaa lagu koray jasiiradda Noirmoutier. Jidhka khudaarta cagaaran waa mid aad u jilicsan oo aad u fiican. Run, kiilogaraamkan baradkani wuxuu ku baxayaa qiyaas ahaan 500 oo Euro.
Baradho kasta wuxuu baranayaa dhibaatada weerarka barafka ee Colorado baradho. Iyadoo mid ka mid ah noocyada ugu caansan ee lagu kobcin karo sawirkaaga, baradhada "Rosara" ayaa aad u nugul weerarrada cayayaankan. Dabcan, kuwa lamid ah waa in la dagaalamaa, haddii kale dhaliddu waxay hoos u dhigi kartaa ¾ ama baradhadu ma siin doonaan midho. Waxaa jira 4 siyaabood oo loola macaamilayo baradiidka Colorado baradho:
Waxaa ka wanaagsan in la siiyo doorbidista habka nafleyda ee halganka. Waxyaabahoodu maaha kuwo halis u ah dhammaan waxyaabaha nool (iyo sidoo kale dhirta) waxaana loogu talagalay kaliya burburinta cayayaanka.
Natiijada ka dib marka la isticmaalo habka bayoolojiga ah ee dagaalyahanka Colorado waa mid aad u wanaagsan, kuwaasi waxaa ka mid ah Bitoxibaccillin, Agravertin, Bicol, Colorado, Fitoverm.
Si loola dagaallamo baradho baradhada Colorado, isticmaal daawooyinka soo socda: Prestige, Tanrek, Iskra Zolotaya, Tabu, Konfidor, Komandor, Corado.
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isticmaalka qalabkaan waxaad ku akhrisan doontaa tilmaamaha xirmada. Doorashada kiimikada suuqa ayaa lagu soo bandhigay tiro badan, laakiin u isticmaal kaliya kiisaska kale ee aan la shaqayn.
Waa muhiim! Markaad isticmaasho kiimikada, hubi inaad raacdo shuruucda nadaafadda oo raac qof walba si waafaqsan tilmaamaha. Haddii kale, waad dhaawici kartaa dhirta, deegaanka iyo inta badan naftaada!
Markaad isticmaasho cayayaanka, hubi inaad u hoggaansanto xeerarka amniga ee soo socda:
Shaqo u yeel kaliya kaddib markaad si taxadar leh oo dhamaystiran u baratid tilmaamaha.
Had iyo jeer xiro dharka ilaalinta markaad taabanayso sunta sunta kiimikada.
Qiyaas ahaan 10 m² oo dhul ah oo aad isticmaali karto wax ka badan 1 litir oo laysku daro.
Ha tijaabin qiyaasta!
Habka farsamada waa ururinta caadiga ah ee Colorado baradho baradho by gacanta. Dadka waaweyn iyo dirxiga waxaa lagu soo ururiyaa weel ka dibna la burburiyaa.
Waxtar ka badan intay doonaan Ku shub biyo karkaraya. Markaad ku wareejisid feejignaanta cayayaanka, xusuusnow in ay qoortooda ku dhuubtaan caleemaha.
Koraaya baradhada, bannaanka ayaa sidoo kale lagu daaweeyaa daaweynta dadweynaha ee ka soo horjeeda baradho-baradho Colorado, maadaama ay yihiin wax aan waxba tarayn bini'aadamka iyo deegaanka. Aan u fiirsanno faahfaahin dheeraad ah. kuwa ugu caansan:
Isku day in aad garaacdo 100 garaam oo birta qoryaha ah kuna qas 10 litir oo biyo ah. Xalkan waxaa lagu buufiyaa dhirta baradhada.
Karkari dambaska mudo ah 15 daqiiqo oo u daadi 2 maalmood. Ka dib, adkee oo kala-gooyaa 50 garaam oo faleebo ah 10 litir oo biyo ah, ku dar 50 garaam oo saabuun ah. Daadi barafka barafka.
Inta u dhaxaysa saf, u samee calendula oo kala firdhaan diirka basasha. Waxay urayaan waxay cabsiin doonaan baradhada barafka ee Colorado.
Shub 500 ml oo biyo ah 2 tbsp. l "Karbofos" iyo ku adkee sida diirka baradho sida. Fidinta diirka saar daasadaha iyo aasidda hareeraha wareegga wareegga. Samee tan ka hor caleemaha koowaad. Cayayaanka oo toosiya isla markiiba way gaajoonayaan waxayna ku degdegayaan inay cunaan cunto sumaysan.
Soo koobidWaxaan jeclaan lahaa in la yiraahdo goosashada baradhada "Rosara" waxay keenaysaa natiijo waxtar leh oo keliya haddii beeritaanka iyo daryeelka dalagga si sax ah loo fuliyay.